Alahady 15 Desambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 15 DESAMBRA 2019
Alahadim-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista “FMKS”- Fanokafana ny Jobily faha-50 taonan'ny Hasin'ny Famonjena
« Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. » (Lioka 10:5-6)
Niantomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fotoana. Rtoa RASOLOFOSON Voahirana Diakona ary mpikambana ao amin’ny FMKS no nitarika raha ny Mpitandrina mpiana-draharaha RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.
Alahady miavaka androany satria izao no ivon’ny herinandrom-bokatry ny FMSK sady fanokafana ny Jobily fankalazana ny faha-50 taonan’ny Antoko-mpihira Hasin’ny Famonjena ary fiarahabana ireo nahavita fiofanana, ireo afa-panadinana ary ireo nahazo salanisa tsara indrindra tamin’ny fahalalàna Soratra Masina.
Ny teny tao amin’ny bokin’ny Salamo 113 : 1-9 no niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana Apostolika. Ny hira fanevan’ny faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM no nanaraka izany.
Nanatanteraka vavaka fisaorana ny mpitarika nony avy eo.
DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY
Zoky RAZAFINDRASATA Lalaina Volanirina mpampianatra ao amin’ny K1 no nanantontosa izany. Ny teny hita ao amin’ny Epistily I Jao 2 : 29b « Fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanaka naterany » no nentiny nitondra ny hafatra.Ny tenin’Andriamanitra eto dia manambara fa raha manao ny marina isika dia mila manatanteraka ny didin’Andriamanitra. Koa amin’izany dia :
– Mila manetry tena ka miaiky ny fahotana
– Mandeha amin’ny mazava tahaka an’i Jesoa
Rehefa vita ny hafatra dia niaraka nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ka namerina namaky ny tenin’ny Soratra Masina natokana ho azy ary niredona ny hira FFPM 779 and 3 ary nofaranana tamin’ny vavaka izany.
Mialoha ny famakiana ny tenin’ny Soratra Masina dia noredonin’ny Fiangonana ny Hira FFPM 823 and. 1. Taorian’izany dia natolotry ny Loholona Razanamparany Clement,Filohan’ ny FMKS ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany dia ny 2 Tan 14 : 1-6 – Lio 10 : 1-7 – Rom 14 : 19-23.. Ny Loholona RAKOTONARIVO Holy, mpikambana ao amin’ny FMKS no namaky misesy ny tenin’Andriamanitra.
Rehefa voavaky avokoa ny perikopa dia niara-nanandram-peo tamin’ny fihirana ny Hira FFPM 179: 1, ny Fiangonana.
Ny teny nangalàna ny hafatra dia izay hita ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka 10 : 1-7. Ny tantara dia manambara fa teny an-dàlana i Jesoa ka niaraka tamin’ny 70 lahy eto amin’ity andininy faha 10 ity. Misy ny toetra takiana amin’ny Mpitory Filazantsara dia : ny manaiky tendrena, miankina amin’ny mpaniraka azy ary mitory ny fiadanana.
1 – Manaiky tendrena.
Teto ny Tompo dia nanendry olona hafa ihany koa tamin’ny tany amin’ny tanin’ny Samaritàna.
Ireto 70 lahy no nirahiny nankany. Hamita ny asany :
– Irahina ianao ho any amin’ny tanàna – mila fanekena – ataony mialoha Azy,
– Mivavaka – hanabetsaka ny mpiasa. I Jesoa no maniraka antsika anao izany rehetra izany
2 – Miankina amin'ny mpaniraka azy
Ny tian’i Jesoa ambara eto dia mila mahatoky ilay hery maniraka anao ianao. Ianao mpitory ny Filazantsraa dia mila miankina amin’ny herin’Andriamanitra fa tsy amin’ny herin’ny tena. Ny sakana dia misy foana toy ny henatra sy tahotra fa raha miankina amin’io Herin’ny Tompo io dia tsy misy tsy ho vita.
Ny eo anivon’ny enti-manana ihany koa dia mety ho fanembatsembanana. Ny Tompo anefa eto amin andininy faha 4 dia milaza fa tsy ilaina ny mitondra ny kitampombola, asan’Andriamanitra no tanterahina. Tokana ny zavatra hangatahin’ny Tompo dia ny fiankinanao Aminy.
3 – Mitory ny fiadanana
Efa mby akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Izy dia efa manantona anao, Ianao fiangonana ve manambara ny fiadanana ?
Ho fampiarana izany dia nasain’ny Mpitandrina nifampiarahaba ny mpiangona ka niarahaba ny teo akaikiny ka niteny hoe « Fiadanana ho anao » Rehefa mandray ianao dia tokony mizara, rehefa mandray ny Fiadanany ianao dia tokony hizara izany ihany koa. Amen
VAVAKA SETRIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA
Nitsangana ny Fiangonana ary nanolotra ny vavaka famelan-keloka ny mpitarika. Ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo no niarahan’ny Fiangonana nanonona.
Rehefa vita izany dia noredonina ny hira FFPM 543 and 1.
Nanatontosa ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena noho ny avy eo.
TATITRY NY ASA FMKS
Ny teny tao amin’ny 2 Tim 2 : 2 no nentiny mpanao tatitra ho fiarahabana ny Fiangonana. Natolotry ny mpitondra hafatra avy hatrany ny :
-Mpikambana : ireo rehetra izay nahavita ny fampianarana Setela, Sefala, SAMM, Fitela ary mpianatra ho Mpitandrina
-Andraikitra : mandritra ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny Mpitandrina
-Tanjona : Fanorenana ny finoana marina
Rehefa vita izany dia nanao ny tatitra mandritra ny taona lasa izy ary nisaotra an’Andriamanitra nandritra izay fotoana niasàna izay, nisaotra ny mpitandrina mivady ary ny fiangonana iray manontolo izay nitondra am-bavaka. Nanao ny hira FF47 and 1-2 ny mpiakambana rehefa vita ny hafatra.
Atoa RAZAFINARIVO Maminirina no nanatanteraka izany.
-Fizarana valisoa ho an’ireo ankizy afaka fanadinana ofisialy tontosain’ny STK Zokiny anio
-Fivoriana tsy ara-potoana ho an’ny mpihevi-draharaha amin’ny Alahady 22 Desambra
-Manomboka ny 19 Desambra ny Herinandro Sambatra amin’ny 6 ora sy fahefany hariva
-Antsoina ireo zokiolona feno 70 taona no mihoatra hisoratra anarana ho fiarahabana azy ireo ny volana Janoary 2020
-Avy amin’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena : Antsankira Noely ho fanokanafana ny faha-50 taona ny sampana ny 20 Desambra amin’ny 6ora sy sasany hariva
-Fiantsoana avy amin’ny VFL noho ny fivoriambe faharoa Alahady 22 Desambra amin’ny 2 ora sy sasany eto anivon’ny Fiangonana.
Niarahaba ny fiangonana ny Mpitandrina Raharijaona ary nanamafy ny fitondrana am-bavaka ireto raharaha manaraka ireto :
– Herinandro sambatra, fankalazana ny Noely sy fitsenanana ny taona vaovao
– Ny Jobily faha 50 taona- ny Hasin’ny Famonjena
VOADY SY RAKI-PISAORANA:
Atoa RALAINDIMBY Haja no nitarika izany. Ny teny tao amin’ny Sal 13 : 5 no nentiny niarahaba ny Fiangonana. Ireto manaraka ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 19 / FFPM 170 : 1 / « Misaotra Anao izahay ». Nisy tamin’ireo mpianakavin’ny finoana no nahazo fahasitranana ary vita ny fitsaboana, nivoaka ny hopitaly.
Ny hira 75: 3 no natao ho fanolorana ny rakitra no sady fanavaozana ihany koa ny fanoloran-tena.
Nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny famonjena avy eo.
HASIN’NY FAMONJENA JOBILY FAHA 50 TAONA
Ny mpitandrina, mpitandrina mpiana-darahara, ny filohan’ny Sampana ROBEL Hanitra, ny filohan’ny Komity Atoa RABEMILA Mamy no nivoaka tany an-tokotany nanala ny lamba nisy ny “banderole” ary nanapaka ny “ruban” ho fanamarihana ny taom-pankalazana. Nanatontosa ny hira fanevany ny Antoko mpihira avy eo « Fitoriana Ampifaliana »
Nandray fitenenana avy eo filohan’ny Komity nanazava ny anton’ny “banderole” lehibe izay mirefy 5m x 3m ary nanao ny resaka savaranonando ny amin’ny asa miandry ho amin’ny taona ho avy. Nofaranan’ny mpitandrina tamin’ny vavaka izany.
FANOLORANA VALISOA IREO AFAKA FANADINANA NOTANTERAHIN’NY STK ZOKINY
Natomboka tamin’ireo nahavita fiofanana mpitoriteny sy katekista, ireo izay nahavita SETELA, SEFALA ary notohizana tamin’ireo izay afaka tamin’ny fanadinana ofisialy izany.
FIARAHABANA IREO NAHAZO SALANISA TSARA INDRINDRA TAMIN'NY FAHALALANA SORATRA MASINA NOTANTERAHIN'NY VAOMIERAN'NY AIM-PANAHY
Nahazo ny anjarany ihany ireo izay nahazo ny salanisa tsara indrindra tamin’ireo nanatanteraka Fahalalana Soratra Masina.
Rehefa tontosa avokoa ny fizaràna ny loka dia nanao vavaka fisaorana ny Mpitandrina nony avy eo.
RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nanatontosa izany. Nisaotra an’Andriamanitratra noho ny fisitrahany ny Fiadanany eto anivon’ny Fiangonana. ; ho an’ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; ho an’ny fihatrehana ny herinandro sambatra ; ho an’ireo izay hanolotena rehetra hiditra Katekomena ; ho an’ireo izay manatontosa sy efa nahavita ny SETELA , SEFALA, ny mpianatra ho mpitandrina ; ho an’ireo manana hataka manokana rehetra ; ireo sahirana, ireo marary, ireo manamanjo ; ho an’ireo ray aman-dreny sy ny mitondra ary ny mpandraharaha rehetra eny anivon’ny synodamparitany ; ireo izay naneho raki-pisaorana sy voady masina. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” Amen
Natao ny hira FFPM 77 : 3 dia notononina ny tondrozotra 2019. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny FFPM 79 nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.
Mpitendry Orga : Ranaivoson Jacky
Fafana : Rabako Tovohery
Feo : Ranaivoson Joël
Fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan
Naka ny sary : Rajaofetra Seta. Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël.